နောက်ဆုံးရ ချဲလ်ဆီးသတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၄.၉.၂၀၂၀ – Sports A2Z
–	ဂိုးသမားသစ် အေဒူယာ မန်ဒီအနေနဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ပေါင် ၂၂ သန်းတန် ပြောင်းရွှေ့မှု အပြီးသတ်ခဲ့အပြီးမှာ လမ်းပတ်နဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလို့ ပြောလိုက်ပြီး လစ်လပ်နေတဲ့ ကျောနံပါတ် ၁၆ က သူ့အတွက် ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေ။
Debut and assist. Great team performance, well done lads! Shoutout @kaihavertz29 on the hat-trick 💙 @ChelseaFC pic.twitter.com/6VuSdgnYoO
— Ben Chilwell (@BenChilwell) September 23, 2020
–	ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ပထမဆုံး လူစားဝင်ပွဲထွက်ခွင့်မှာ တိုက်စစ်မှူး ဂျီရူးသွင်းယူဖို့ ဖြတ်တင်ဘောတစ်လုံးကို လှလှပပ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ ဘန် ချေးလ်ဝဲလ်က ပထမဆုံးပွဲမှာ အသင်းကို အကျိုးပြုနိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြား။
–	အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ချဲလ်ဆီးကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ညိုကို ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့အပြီးမှာ သူဟာ သောမတ်စ် ပါတေး မဟုတ်လို့ သူ့အတွက် ငွေမဖြုန်းဖို့နဲ့ ရှိတဲ့သူနဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ဖို့ ပရိသတ်တွေ တိုက်တွန်း။
–	ချဲလ်ဆီးအသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ သတင်းတွေ ပြေးနေခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါကို ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက တစ်ရာသီအငှားနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပြီး လန်ဒန်ကလပ် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကလည်း ချိတ်ဆက်စုံစမ်းနေ။
–	လမ်းပတ်ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ကစားသမားတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့ ဂျော်ဂျင်ညိုကို ကမ်းလှမ်းမှု ရခဲ့ရင် ရောင်းထုတ်သွားဖို့ ချဲလ်ဆီးပြင်ဆင်နေပြီး ဒက်ကလန် ရိုက်စ်ကို ခေါ်ယူရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ မာရီနာ ဂရာနော့ဗ်စကားယာ စဉ်းစားနေ။
–	ချဲလ်ဆီးကွင်းလယ်လူ တီမူး ဘာကာယိုကို,ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကြားထဲမှာ သဘောထားကွဲလွဲနေကြပြီး အများစုက ခေါ်ယူလိုနေတဲ့ အားကစားဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒိုရဲ့ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြ။
–	မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလူ ခရစ္စ စမောလင်းအတွက် ဈေးညှိဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ရိုးမားအသင်းအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း ရူဒီဂါကို ချဲလ်ဆီးကနေ ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေပြီး အငှားနဲ့ ကြိုးစားဖွယ်ရှိနေ။
–	ဂိုးသမားသဈ အဒေူယာ မနျဒီအနနေဲ့ ခြဲလျဆီးအသငျးကို ပေါငျ ၂၂ သနျးတနျ ပွောငျးရှမှေု့ အပွီးသတျခဲ့အပွီးမှာ လမျးပတျနဲ့ နညျးပွ အဖှဲ့ဝငျတှေ အားလုံးနဲ့ လကျတှဲလုပျဆောငျဖို့ စိတျလှုပျရှားနပွေီလို့ ပွောလိုကျပွီး လဈလပျနတေဲ့ ကြောနံပါတျ ၁၆ က သူ့အတှကျ ဖွဈလာဖို့ ရှိနေ။
–	ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ ပထမဆုံး လူစားဝငျပှဲထှကျခှငျ့မှာ တိုကျစဈမှူး ဂြီရူးသှငျးယူဖို့ ဖွတျတငျဘောတဈလုံးကို လှလှပပ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တဲ့ နောကျခံလူ ဘနျ ခြေးလျဝဲလျက ပထမဆုံးပှဲမှာ အသငျးကို အကြိုးပွုနိုငျခဲ့လို့ ဝမျးမွောကျကွောငျးပွောကွား။
–	အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ခြဲလျဆီးကှငျးလယျလူ ဂြျောဂငျြညိုကို ခြိတျဆကျနတေယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျလာခဲ့အပွီးမှာ သူဟာ သောမတျဈ ပါတေး မဟုတျလို့ သူ့အတှကျ ငှမေဖွုနျးဖို့နဲ့ ရှိတဲ့သူနဲ့ပဲ ရှဆေ့ကျဖို့ ပရိသတျတှေ တိုကျတှနျး။
–	ခြဲလျဆီးအသငျးကနေ ထှကျခှာဖို့ သတငျးတှေ ပွေးနခေဲ့တဲ့ နောကျခံလူ အနျတိုနီယို ရူဒီဂါကို ပီအကျဈဂြီအသငျးက တဈရာသီအငှားနဲ့ ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနပွေီး လနျဒနျကလပျ ဝကျဈဟမျးအသငျးကလညျး ခြိတျဆကျစုံစမျးနေ။
–	လမျးပတျရဲ့ စိတျကွိုကျကစားသမားတဈဦးမဟုတျတဲ့ ဂြျောဂငျြညိုကို ကမျးလှမျးမှု ရခဲ့ရငျ ရောငျးထုတျသှားဖို့ ခြဲလျဆီးပွငျဆငျနပွေီး ဒကျကလနျ ရိုကျဈကို ချေါယူရာမှာ အသုံးပွုနိုငျဖို့ မာရီနာ ဂရာနော့ဗျစကားယာ စဉျးစားနေ။
–	ခြဲလျဆီးကှငျးလယျလူ တီမူး ဘာကာယိုကို,ကို ချေါယူဖို့အတှကျ ပီအကျဈဂြီအသငျးရဲ့ နညျးစနဈပိုငျးဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူတှကွေားထဲမှာ သဘောထားကှဲလှဲနကွေပွီး အမြားစုက ချေါယူလိုနတေဲ့ အားကစားဒါရိုကျတာ လီယိုနာဒိုရဲ့ ဆန်ဒကို ဆနျ့ကငျြခဲ့ကွ။
–	မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနောကျခံလူ ခရစ်စ စမောလငျးအတှကျ ဈေးညှိဖို့ ခကျခဲနတေဲ့ ရိုးမားအသငျးအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားဟောငျး ရူဒီဂါကို ခြဲလျဆီးကနေ ပွနျလညျချေါယူဖို့ စောငျ့ကွညျ့နပွေီး အငှားနဲ့ ကွိုးစားဖှယျရှိနေ။
နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာစီးတီးသတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၄.၉.၂၀၂၀